Farmaajo oo cunaqabateyn dhaqaale saarey Somaliland | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo cunaqabateyn dhaqaale saarey Somaliland
Farmaajo ayaa joojiyay lacagtii deeqbixiyaasha ugu tala-galeen Somaliland, oo sanduuq gaar ah loogu shubi jiray.
HARGEYSA, Soomaaliya - Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shaaciyay in Farmaajo uu cunaqabateyn dhaqaale saarey maamulkiisa afartii sano ee lasoo dhaafay.
Muuse oo ka hadlayay xuska 61 guuradii kasoo wareegatay markii gobollada waqooyi ay xoriyadda ka qaateen Ingiriiska 26-kii June 1960 ayaa sheegay in lacag gaareysa ku dhawaad ama ka badan $60 milyan oo dollar uu xayiray Farmaajo.
Lacagta ayaa Bangiga Adduunka ugu tala-galay Somaliland, waxaana loo soo mariyay dowladda Soomaaliya, taasoo Maamulka Muuse Biixi uu diiday, iyadoo dalbaday in iyaga wixii loo qoondeeyay si toos ah loo siiyo, oo aan loo marin maamulka fadhiya Muqdisho.
"Xamar wixii soo mara anaga waa naga xaaraan, halkooda haku haystaan intaas iyo in ka badanba, waayo gobonimadeenna kuma doorsanayno lacag," ayuu yiri Muuse Biixi, oo intaasi ku daray inay Somaliland isku tashatay.
Sanduuqa dhaqaalaha Somaliland waxaa la abuuray 2012 shirkii London ee Beesha Caalamka u qabatay Soomaaliya, xiligaas oo soo billowday wadahadallada labada dhinac, oo markii dambe joogsaday.
Sanadkii tagey, Somaliland ayaa joojiyay wadashaqeyntii QM kadib markii mashruuc horumarineed oo loogu tala-galay Soomaaliya loo gacan-geliyay dowladda Federaalka ee waqtiga ka dhamaadey, uu hogaamiyo Farmaajo.
Somaliland oo sheegata inay ka go'aday Soomaaliya ayaa mudo 30 sano ah waxay raadinaysaa madax-banaani, iyadoo Caalamka u aqoonsan yahay wali inay gobolka kamid ah Soomaaliya tahay, waxaana mashaariicdii loogu tala-galo loo marsiiyaa Muqdisho.